Puntland oo laga furay talaalka dabaysha oo ay helayaan xilligan dadka waa wayn (Dhegeyso) – Radio Daljir
Puntland oo laga furay talaalka dabaysha oo ay helayaan xilligan dadka waa wayn (Dhegeyso)
Oktoobar 19, 2013 5:41 b 0
Garoowe, October 19, 2013 – Guud ahaan deeganada Puntland waxaa maanta la daah furay wejigii toddobaad ee talaalka dabaysha, kas oo ka duwan kuwii hore isla markaasna haatan lagu beegsanayo dadka waa way nee ku sugan dhamaan gobollada oo idil.
Munaasabad balaaran oo ka dhacay Garoowe isla markaasna ay ka qayb galeen madaxda wasaarada caafimaadka ee Puntland, masuuliyiin ka socda WHO iyo UNICEF, dakhaatiir kala duwan, qaybaha bulshada iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo talaalka furay.
?Talaalka waxaa xiligan lagu beegsanayaa dadka waa wayn ee gobollada Puntland, guri kasta waa la tegayaa iyadoo dhibcanaha la siinayo qof kasta oo reer Puntland ah.? Ayuu yiri Dr. Cabdirisaaq Garweyne ka tirsan saraakiisha wasaarada caafimaadka ee Puntland.
Wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Cali Cabdulaahi warsame oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ay balanqaadayaan in ay sii wadi doonaan howlaha talaalka, balse waxaa uu ugu? baaqay waalidiinta in ay xiligan iyagu ka faa?iidaystaan talaalka dabaysha.
Hay?ada UNICEF ayaa sheegtay in Puntland ay samaysay dadaal dheeraad ah tan iyo markii la helay kiisas ka mid ah xanuunka dabaysha oo dalka dib ugu soo noqday.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen. Cabdisamad Cali shire oo ayaa furay talaalka cusub ee dabaysha oo ay dadka reer wayn ay xiligan ka faa?iidaysan doonaan, ?Waa in aynu gacan ku siinaa bahda caafimaadka ee reer Puntland in ay gacan siiyaan shaqaalaha talaalka wadda ee gobolka.?
DHEGEYSO: Gen. Cabdisamad Cali shire madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka hadlay talaalka
Ajmal Mansour iyo xubno ka tirsan muslimiinta Britian oo looga digay khatarta Argagixisada
Ururka HIRDA oo abaalmarin dhowaan la siiyey ku tilmaamay dhiiri-gelin muhiim ah (Dhegeyso)